Di na nwunye Tattoos - Atụmatụ Echiche Nzuzo
sonitattoo February 17, 2017
1. Di na Nwunye Aka na aka na-eweta anya mara mma
Di na nwunye di ka di na nwunye mara nma di n'aka nri ha. Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha mara mma.
2. Di na Nwunye Ihe ndị dị n'ime obi eme ka di na nwunye na-ele anya
Di na nwunye di na nwunye di na nwunye di na nwunye; Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha mara mma ma mara mma
3. Di na Nwunye Aka na ogwe aka Mee ka di na nwunye mara mma
Di na nwunye nwere mmasị ịlụ di na nwunye n'azụ ogwe aka. Nke a mere ka ha dị mma.
4. Di na Nwunye Aka na aka eme ka di na nwunye na-ele anya
Brown di na nwunye na - ahuru Di na Nwunye na aka ha na igodo onk nwa na imechi imechi; Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha mara mma ma mara mma
5. Di na nwunye di na nwunye na akuku elu na-enye ha anya mara mma
Di na nwunye nwere akpụkpọ anụ ga-aga maka nke a nke Diple Tattoos na di na nwunye na igbe dị elu nke na-acha anụnụ anụnụ. Nke a na-eme ka ha mara mma
6. Di na nwunye na-eji aka na-acha anụnụ anụnụ na agba aja aja na-eme ka ọ dịkwuo egwu
Ụfọdụ di na nwunye maka Ntuzi Di na Nwunye na aka na-acha anụnụ anụnụ na agba aja aja iji gosipụta ịhụnanya ebighi ebi ha n'ebe ibe ha nọ
7. Di na nwunye n'azụ na azụ na-eweta anya dị ịtụnanya
Brown di na nwunye ga-ahụ di na nwunye di na aka na azụ; Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha dị ịtụnanya ma dị mma
8. Di na Nwunye Ihe ndị dị n'ime obi eme ka ebe nchekwa ma ọ bụ mee ka ọ bụrụ ihe ncheta
Ihe ka ọtụtụ ná ndị mmadụ na-aga maka Ntị Di na Nwunye na n'elu igbe iji chetara ha otu oge pụrụ iche n'oge ndụ ha.
9. Di na Nwunye Aka na nkwojiaka eme ka di na nwunye mara mma.
Di na Nwunye di na nkpa aka na-eme di na nwunye ka ha mara mma ma na-adọrọ mmasị n'ihu ọha.
10. Di na Nwunye Aka na olu Mee ka di na nwunye di nma n'anya
Di na nwunye hụrụ Di na nwunye n'anya na azụ azụ iji nye ha ọdịdị dị mma
11. Di na Nwunye na mkpịsị aka na-eme ka di na nwunye na-ele anya
Brown di na nwunye na-ahuru Di na Nwunye Aka na ha nkwojiaka; Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha mara mma ma mara mma
12. Di na Nwunye Aka na gburugburu nkwojiaka na-eweta ncheta ma ọ bụ mee ka ọ bụrụ ihe ncheta
Ihe ka ọtụtụ ná ndị mmadụ na-aga maka Mkpịsị Di na Nwunye gburugburu nkwojiaka iji chetara ha otu oge pụrụ iche n'oge ndụ ha.
Tags:di na nwunye
nnụnụakpị akpịegbu egbu osisi lotusna-egbu egbuegbugbu egbugbuazụ azụegbu egbuEgwu ugoagbụrụ eboenyí egbu egbuegbu egbu egbuaka akaegbugbu maka ụmụ agbọghọegwu egwuụmụnne mgbuAnkle Tattoosokpueze okpuezemehndi imeweegbu egbu hennaọdụm ọdụmrip tattoosọnwa tattoosngwusi pusiaka mma akaegbu egbu diamonddi na nwunyezodiac akara akaraUche obikoi ika tattooỤdị ekpomkpandị mmụọ oziegbu egbu okpundị na-egbuke egbukeudara okooko osisiechiche egbugbuegbu egbu ebighi ebiakwara obiegbu egbu maka ụmụ nwokena-adọ aka mmaNtuba ntughariegbu egbu mmirimma tattoosaka akaima ima mmaakara ntụpọenyi kacha mma enyin'olu oluụkwụ akaGeometric Tattoosarịlịka arịlịka